विचार – Voice Of Entrepreneurs
Raju Shrestha २०७७ चैत्र १०, मंगलवार ०९:४२
उपेन्द्र रिमाल नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट पेश गरिएको विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिको संशोधन प्रस्ताव २०७७ हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । चालू आव २०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत ५० हजार घरेलु बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएता पनि प्रस्तावित अनुदान नीति समयमा नै पारित नहुँदा » पूरा पढ्नुहोस्
म सबै क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीकोे साझा उम्मेदवार हुँ’
Raju Shrestha २०७७ मंसिर ९, मंगलवार ०८:१२
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारण सभा मंसिर ११–१३ गते हुँदैछ । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । तसर्थ, सधैंझै यसपटक पनि महासंघमा अबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने चासो र कौतुहलता छ । यतिखेर उद्योगी व्यवसायीहरू प्यानल नै बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यसअघि महासंघको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित चन्द्रप्रसाद ढकालले » पूरा पढ्नुहोस्
Raju Shrestha २०७७ असार २०, शनिबार १९:२७
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग राससले गरेको कुराकानीको अंश: आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन् । यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको » पूरा पढ्नुहोस्
Raju Shrestha २०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार १०:२०
नेपाली काँगे्रसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याउनुभएको छ । डा रिजाल अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाली जनताले देखाएको अभूतपूर्व एकता प्रदर्शनीबाट सन्देश लिन » पूरा पढ्नुहोस्
Raju Shrestha २०७७ जेष्ठ ३, शनिबार १०:४९
गुणराज ढकाल । प्राकृतिक सम्पदाको अथाह स्रोतले भरिएको हाम्रो देश आफैंमा विविधतापूर्ण छ । भौगोलिक विविधताले गर्दा विषमता आफैंमा चुनौती र सम्भावना बोकेर उभिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालका झण्डै ६४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा संलग्न भएता पनि, सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गरी विभिन्न किसिमका अनुदान प्रदान गरे पनि नेपालका अधिकांश कृषक परम्परागत खेती » पूरा पढ्नुहोस्
Raju Shrestha २०७६ चैत्र २५, मंगलवार २१:३४
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज पदबहाली गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि अधिकारी केन्द्रीय बैंकको कार्यालय बालुवाटार पुगेर पदबहाली गर्नुभएको हो । नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीको स्वागतका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारी बैंक परिसरमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सोमबार बसेको » पूरा पढ्नुहोस्
चुनौती सामना गर्न सकिन्छ
Raju Shrestha २०७६ चैत्र १५, शनिबार १३:४६
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको अन्तरर्वार्ता । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो उपचार लकडाउन नै हो । लकडाउनलाई कसरी बुझे भन्ने कुरा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भारतमा पनि २१ दिने लकडाउन घोषणा भएको छ । यसबाट बच्ने सबैभन्दा सजिलो » पूरा पढ्नुहोस्
‘बीमाबारे स्कुल तहदेखि नै पढाउनुपर्छ’
Raju Shrestha २०७६ चैत्र २, आईतवार ११:५९
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तसँगको कुराकानी : वित्तीय क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? म यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुमा मुख्य देन मेरो बुबाकै हो। म सानो हुँदादेखि नै मेरो बुबा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले काम गर्दैगर्दा मैले पनि केही बुझेँ। २०६२/०६३ सालसम्म म नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स एन्ड » पूरा पढ्नुहोस्